Kedu ihe bụ Qi Gong | Nyocha uche nke ọma
Qi Gong | Uche Nlekwa Ahụike
Esemokwu n'azụ okwu mkpokọta
Ihe omume Qi Gong a ma ama
Izi ozi iri
Onye ọ bụla nwere mmasị na Asia na nkà mmụta ọrụ taa ga-achọta ngwa ngwa. Ntinye dị ukwuu, mkpa ahụ. Ma n'adịghị ka ihe atụ, ndị Japan nakido, Gong Fu ma ọ bụ Kung Fu na-eweta ụfọdụ uru. Ebe ọ bụ na nkà nke Kung Fu - ọ bụ Buddhist Shaolin ma ọ bụ Daoist Wudang Kung Fu - nwere ihe na-adịghị na ndị ọzọ na nkà mmụta ihe egwu. A na-akpọ ya Qi Gong.
Kedu ihe bụ Qi Gong?
Qi Gong bụ okwu mkpokọta nke sitere na 1950 afọ. N'okpuru ebe a bụ ihe omume niile na-emetụta ma na-ewusi Qi ike, ndụ ike. Ọtụtụ n'ime ihe omume ahụ karịrị otu puku afọ. Ọbụna ndị mọnk si Buddha mbụ na ndị mọnk Daoist na-eme ihe omume.
Ihe omume Qi Gong na ọdịdị
Otú ọ dị, ọ bụghị nanị Qigong na-arụ ọrụ dị ịrịba ama na nkà mmụta ndị Chinese, kamakwa na nkà mmụta ọgwụ Chinese, ma ọ bụ TCM maka nkenke. N'ebe ahụ, ọ bụ otu n'ime ogidi ise nke TCM na-ewu. Akụkụ dị iche iche na-ejikọta ka ha dịrị n'otu. Ndị a na-agụnye ntụrụndụ, udo na ezi uche, yana njem, iku ume na iche echiche. N'adịghị ka ntụgharị uche, ebe a na-ejikọta usoro ahụ na ntụrụndụ. Mmiri ahụ na-eme n'otu nkwekọ, mmeghari ahụ na-agba ọsọ na ngwa ngwa.
Ọ bụrụgodị na e a okwu maka ihe nile ihe omume ọnụ, Qi Gong bụ nnọọ iche iche. The kpọmkwem ọnụ ọgụgụ nke niile omume a na-amaghị. The dịgasị iche iche nke omume nwere ike kọwara ọtụtụ omume kemgbe ọtụtụ narị afọ. Master oge ochie China nyere ha usoro omume naanị ha na-amụrụ on. Nke a, n'aka nke ya, gbanwee ya na mepụtara ya ọzụzụ echiche. Site n'iburu mara na West na mgbakwunye ọtụtụ ọhụrụ echiche e kwukwara mee Qi Gong nke sara mbara pụta Europe na America ọzọ inweta.
Omume QiGong maka udo nke obi
N'agbanyeghị ụdị dịgasị iche iche, ihe omume Qi Gong nile nwere otu ihe mgbaru ọsọ: iji dozie Qi n'ime ahụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ụdị omume ị na-eme. Omume nke onye ọ bụla na-ejikọta ụfọdụ ọdụm ike, ndị meridian, na ahụ mmadụ. N'ihi ya, mmetụta nke omume ahụ dị iche.
Site na nkụzi nke TCM na-egosi na e nwere naanị otu otu ụdị Qi, ma ihe: The akụkụ okuku ume na Qi, nzere Qi, nri Qi, meridians Qi, na ngwa-Qi, nke n'aka nke ọ bụla n'ime akụkụ a na-ekewa. All iche iche nke Qi pụrụ inweta adịghị, nke mgbe ụfọdụ nwere ike na-ada n'ime itule ọzọ. N'ihi na nke a, Otú ọ dị, ọ chọrọ kwesịrị ekwesị mmega ruru adịghị.
Dị ka a na-achị, Qi Gong na otú kụziri na otu onye nwere ike na-eme na-enweghị ihe ọmụma nke onye ihe nakawa etu esi nke adịghị n'ebe ahụ, Otú ọ dị. The kụziri Mara nkà Qi Gong Aims nwekwara nchegbu na-eweta na Qi nke na-amụrụ ebe iji hụ na ogbugbu nke Kung Fu bụ ihe dị ike na energetic.
Ụfọdụ omume na-egosipụta a larịị nke maara aha ha na-si otú kụziiri ugboro ugboro. A na-agụnye asatọ brocade omume na 18 mmegharị Taiji Qigon, Ba Fanhuangong, Chan Mi Gong, ọtụtụ iri-eche n'echiche 5 akụkụ Qigong, egwuregwu na nke 5 ụmụ anụmanụ ma ọ bụ Meridian Qigong.
Ụdị Qi Gong dịgasị iche abụghị naanị na mmetụta na nhazi usoro, kama na mmalite. Dị ka Kung Fu, Qi Gong nọkwa n'okpuru mmetụta nke nnukwu okpukpe okpukpe Buddha na Daoism. N'ụlọ obibi ndị mọnk Daoist na Wudang-Shan, ọ dịghị mgbe a ga-akụziri gị Buddhist Shaolin Qi Gong na vice versa.
Chan M Gong
Ihe atụ nke Qi Gong Buddha bụ Chan Mi Gong. A na-akpọkwa nke a asambodo. N'ezie, n'ụdị a, a na-akpali ọkpụkpụ azụ site n'enyemaka nke mkpụrụ edemede dị iche iche. Ọkpụkpụ ahụ na-enyefe ahụ dum.
Gịnị mere anyị ji eri akwụkwọ nri?
Otu ihe atụ nke Daoist Qi Gong bụ echiche iri sitere na Mount Wudang. N'ime mmega ahụ, a ga-elekwasị anya na ụkpụrụ Daoist nke nkwụsị nke opposites. Ihe omumu nke etiti bu "Oghere lotus" meghere, nke a na-abughi nani n'oru oru aru kama o bu ihe ime mmuo.
Ọ na-ewe ọtụtụ ahụmahụ na omume iji mara okwu ahụ nke ọma. Ntụgharị uche nke ndị China na nkà na-agagharị bụ ihe dị ka afọ nke mmepe na nha nke China na-ekwe ya. Ka o sina dị, maka ndị mbido, ụdị Qi Gong ọ bụla kwesịrị ekwesị. N'ikpeazụ, ihe omume niile nwere otu ihe mgbaru ọsọ: otu nkwekọrịta na-adaba na otu.
Iwepụ ntutu ntutu isi / ahụ ntutu - "€ -
Massage na ụlọ | Wellness
Isi na-elekọta ndị ikom | Mma Mma
Lemọn maka ọdịmma na ịma mma
Ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ Mma Mma Mma
Feng Shui | Ọgwụ ọma
Ngosiputa Ngwa Nleta na ngwa ha Ngosiputa Ngwa & Mma
Ngosiputa Ngwa Nzuzo | Ngosiputa Ngwa & Mma
Sauna Finnish | Wellness